M. S. Aadan: "Annigoo wata maamulka 6-da gobal ayaan tagayaa KISMAAYO" - Caasimada Online
Home Warar M. S. Aadan: “Annigoo wata maamulka 6-da gobal ayaan tagayaa KISMAAYO”
M. S. Aadan: “Annigoo wata maamulka 6-da gobal ayaan tagayaa KISMAAYO”
Baydhabo (Caasimada Online) Maxamuud Sayid Aadan oo ah ku-xigeenka madaxweynaha maamulka lixda gobal ee koonfur galbeed ee dalka,ayaa sheegay in maamulkaas dhawaan la geyn doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Baay.
Isagoo ka qaybgalaayay barnaamijka Jimcaha ee BBC-da ayuu shegeay in maamulka KMG ah ee Jubba oo lagu soo dhisay Addis Ababa uu meesha ka baxau sidda uu hadalka u dhigay.
“Maamulka KMG ah ee Jubba waxa uun ku hesiiyay Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ahaa wasiiru dowlihii madaxtooyada, marka maamulkaas wuxuu ka socon waayay xitaa magaalada Kismaayo, waxaan dhihi lahayn dadka taageera maamulka lixda gobal oo ay ku dhan yihiin dadka ku dhaqan gobalada loo dhisay” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Wuxuu kaloo sheegay in isagoo wata maamulka lixda gobal in uu tagi doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubbada Hoose.
Si kastaba, hoggaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubba, Axmed Madoobe ayaa isna sheegay in maamulkooda ay aqoonsan yihiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka.